Laser land leveler Factory, Suppliers - China Laser land leveler Manufacturers
egg incubator hatching mazai ehuku automatic intelligent machines Kuberekesa nekudyisa kugadzira huku.
Multifunctional thresher ine advanced dhizaini
The peeling uye inotenderera roller
5TYM-850 mupurisa wechibage
mabasa ekuyera ivhu zvakanyanya-chaizvo.
Yedu 1JP yakatevedzana laser land leveler inoshandiswa nematirakita.Inonyanya kushandiswa kumabasa emunda wakatsetseka munyika yakaoma, iyo inobatsira kuchengetedza mvura yekudiridza, kuwedzera kubuda, kuvandudza mwero wekushandiswa kwefetereza, chiyero chekushandiswa kwevhu, kuenzanisa kushanda kwevhu nekubudirira.
Chimiro chechimiro chechigadzirwa ichi chine maitiro emutoro muduku wekushanda, kushanda kwekugadzirwa kwepamusoro, kushandiswa kwemari shoma uye kunaka kwepasi, nezvimwewo. Muchina wakanakisisa mukusimudzirwa kwekurima uye flatland teknolojia.
12PJS yakatevedzana yakadzika yakasununguka laser grader
Iyo yakadzika yakasununguka laser grader muchina wekurima unoshandiswa nematarakita ane simba guru rebhiza.Inonyanya kushandiswa kugadzira ivhu kurima pakati pemitsara.Pamusoro pemabasa ese eakajairwa laser graders, Iyo ine zvakare yakadzama kusunungura mabasa, ayo anobatsira kuvandudza chimiro chevhu regejo, kutyora pasi pegejo, kunatsiridza kuchengetedza kwemvura uye kunyorova kwevhu, uye kukurudzira kukura kwezviyo.
Kumhanya kwekushanda (km/h)
Hudzamu hwakavigwa (mm)
Otomatiki yekuyera kona(°)
Signal reception angle(°)
Laser inoshanda radius(mm)
Kushanda dip angle(°)
Hydraulic mafuta pressure (Mpa)
12PJZ yakatevedzana yega-yekuenzanisa laser giredhi
12PJZ yakatevedzana yega-yekuenzanisa laser giredhi inogona kushandisa mbiri inogamuchira kana imwe chete inogamuchira kugamuchira.Kana uchigamuchira neanogamuchira imwechete, inogona kushandiswa seyakajairwa giredhi.Kana yakapetwa kaviri, inogona kudzora otomatiki foshoro yakafuratirwa kuti igare ichichengetedza imwe hama yekona nepasi, iyo inogona kudzivirira iyo yese Iyo yekuronga haina mutsetse.Makona emunda wese haana makona akafa, uye munda wese unogona kunge wakachinjika zvachose kana kuti wakatwasuka.
12 PJD Series Kupeta Laser Land Leveler
1.Iyo arched traction structure inopa imwe buffer ye traction force iyo ichadzivirira chimiro zvakanaka.
2.The fulcrum of the scraper inofamba shure uye pasi, izvo zvinoita kuti zvive nyore kudzora apo scraper inokwira uye inodonha.Uye hazvisi nyore kudonha kana uchishanda kuderedza wavy pasi chitarisiko.
3.Folding scraper, ichabvisa scraper paunenge uchifamba kuti uwedzere kudarika, uye isa pasi scraper paunenge uchishanda, kuwedzera hupamhi hwekushanda uye kuvandudza kushanda kwekushanda.
4.The angle of the scraper inogona kugadziriswa.Maererano nevhu rakasiyana-siyana, kona yekushanda ye scraper ichagadziriswa shure uye mberi kuti iite kuti scraper isvike kushanda kwakanakisisa.
Kupeta kukuru (mm)
Xuzhou Chens-simudza Kuvaka Michina CO., LTD.
Yunlong Zone, Xuzhou Guta, Jiangsu Province, China
Zvinoverengeka zvakajairika peanut shellers
Tekinoroji musimboti we-full-feed peanut p...
Yakasanganiswa tekinoroji yekukohwa nzungu ye...
Michina yekucheka nzungu ine nhanho mbiri
Chibage nesoya bhinzi dzinodyara dzakagadzirwa kuChina